स्टुडियोमा त जो पनि हिरो बन्छ,सच्चा कलाकारले स्टेजमा जादु देखाउन सक्नुपर्छ -दीपक बज्राचार्य |
स्टुडियोमा त जो पनि हिरो बन्छ,सच्चा कलाकारले स्टेजमा जादु देखाउन सक्नुपर्छ -दीपक बज्राचार्य
3 January, 2017 | Bhawana Pathak | 775 Views | comments
गायक दीपक बज्राचार्य र उनको ब्यान्ड ‘द रिदम’ ले अस्ति मात्रै नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गर्‍यो । ‘अल्लारे…’ बोलको उक्त भिडियो/गीत दीपकको परिचित स्टाइलभन्दा अलि पृथक छ । अकस्टिक गिटारमा ल्याटिन पप गाउँदै आएका उनले यसमा भने गिटार र ड्रम्सलाई मादल र सारंगीसँग फ्युजन गराएका छन् । त्यसरी निकालिएको नौलो धुनमा उनी झुमेका छन्, निस्फिक्री ।
दीपक एन्ड द रिदम ब्यान्ड अचेल यस्तै अनेक प्रयोगमा जुटेको छ । यसअघि निकालेको ‘जानी जानी…’, ‘बेहाल…’ जस्ता गीतमा पनि उनीहरूले आधुनिक र परम्परागत बाजा एकसाथ जुधाएका थिए । त्यसले बेग्लै खालको झंकार पैदा गर्‍यो । फिरोज बज्राचार्य, रोजन कायस्थ र रिकी शाक्यको टोलीमा नेतृत्व सम्हालिरहेका दीपक नै यो नौलो कन्सेप्टका डिजाइनर हुन् । गरिआएको चिज पर्याप्त भइसकेकाले उनले अर्को सांगीतिक यात्रा सुरु गरेको बताए ।
‘मेरो जानरा पप हो,’ साढे दुई दशकदेखि संगीत क्षेत्रमा क्रियाशील दीपकले भने, ‘यसलाई छोड्न सक्दिनँ । तर, यही विधालाई अर्को शैलीमा प्रस्तुत गर्दा म र श्रोता दुवैलाई नौलो अनुभूति हुन्छ ।’
दीपकका अनुसार सबै बाजाले सबै प्रकारका धुन सिर्जना गर्न सक्छन् । तसर्थ, उनले पश्चिमा मूलको पप विधालाई स्थानीय बाजाको तालमा गाउन थालेका छन् । दुई थरिका बाजा मात्रै होइन, दुई अलग ट्युनलाई समेत फ्युजन गराउने उनको धोको छ । यस्तो गर्दा स्थानीय चिजको मौलिकता नबिगार्न आफू कटिबद्ध रहेको बताए ।
दीपकले सुरुमा आफ्ना चर्चित गीतलाई धिमे, खैँजडी, मादल, सारंगी, नगरालगायत बाजामा प्रस्तुत गरेका थिए । पाटन दरबार क्षेत्रका भजन मण्डली र अन्य स्थानीय कलाकारलाई वाद्यवादक बनाएर प्रस्तुत गरिएको पहिलो कार्यक्रम नै सुपर हिट भइदियो । उनी रौसिए । त्यसपश्चात् नयाँ गीतमा पनि आधुनिक र परम्परागत वाद्यवादनको सम्मिश्रण गराउन थाले । उनको पप–फ्युजनले अहिले राम्रो माइलेज पाइरहेको छ ।
‘परम्परागत बाजा खोज्दै जाँदा बाजाको भण्डारै भेटियो,’ दीपकले भने, ‘सबै बाजालाई सबै गीतमा एकैचोटि बजाउन सम्भव भएन । त्यसैले गीतैपिच्छे एक/दुइटा ट्ेरडिसनल बाजा राख्ने निर्णय गरेका छौं ।’ त्यसो त उनले ‘क्रिम अफ रिदम’ नाममा एथ्निक बाजा बजाएर कन्सर्ट नै गरेका थिए । त्यसको अभिलेख युट्युब र दीपकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ । छालाले बनेका इन्स्ट्रुमेन्ट भेला पारेर उनको जम्बो टोलीले दिएको प्रस्तुतिलाई वृत्तचित्रका रूपमा तयार पारिएको छ ।
सन् १९९० को दसकमा ‘लिटलुन्स’ नामक ब्यान्ड गठन गरेर पप गीत गाउन थालेपछि दीपकको चर्चा मौलायो । ‘आसै आसमा’, ‘समय’, ‘झुमीझुमी’, ‘अन रस’ लगायत एल्बम निकाल्दै गए । नेपाली–अंग्रेजी भाषामा ‘ओ अमिरा…’ गाएपछि उनले ‘फर्केर आउने छैन…’, ‘अँध्यारोमा छाउँछौ तिमी…’ जस्ता सेन्टिमेन्टल पप र ‘मायाको डोरीले…’ मा फ्लमेङ्गो स्वाद भित्र्याएका थिए ।
‘ती गीत निकाल्दा सबैले मलाई पपस्टार भनिदिए’, दीपकले भने, ‘मख्ख परियो । तर, ती त नेपाली श्रोताका लागि मात्रै नौला रहेछन् । विदेश जाँदा हाम्रो मौलिकता खोजियो ।’ उपत्यकाकै नेवार र त्यसमाथि संगीतकर्मी भइसक्दा पनि आफूलाई नेवारी वाद्ययन्त्रबारे आवश्यक जानकारी नभएको भान भएपछि दीपक जुर्मुराए । एथ्निक नेपाल फाउन्डेसन नामक संस्था खोलेर उनले उपत्यकाका प्राचीन र विद्यमान बाजाबारे अनुसन्धान सुरु गरे । उपलब्ध लोक बाजाहरूलाई आफ्नो सिर्जनामा प्रयोग गर्न थाले । सारंगी र धिमेलाई गिटार र ड्रमसेटसँग परीक्षण गरी हेरे । गज्जब सुनियो भन्ठाने । तर, केही ‘बुज्रुग’ले उनलाई थर्काए– हाम्रा लोक बाजालाई जथाभावी बजाउने ? विदेशी संगीतमा मिसाउने ? मनपरी गर्ने ? दीपक अवाक् बने ।
‘हाम्रा बाजाहरूको संरक्षण गर्न तिनको उपयोग गर्नैपर्छ,’ दीपकको मान्यता छ, ‘नयाँ पुस्ताको रुचिअनुरूप बजाइदियो भने तिनले यिनको महत्त्व बुझ्छन् अनि पो बाजा लोप हुँदैन ।’उनको बाजा संरक्षण अभियानलाई साथ दिने पनि हुँदै नभएका होइनन् । तर, पर्याप्त छैनन् । व्यावसायिक सहयोगी नभएकाले उपत्यकाबाहिर गएर अध्ययन गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । तैपनि दीपक र उनको समूह अहिले गुनासो गर्ने मुडमा छैनन् । गर्दै गएपछि स्थिति बस्दै जान्छ भन्ने लागेको रहेछ दीपकलाई ।
विदेशमा कार्यक्रम गर्दा नेपाली संगीतमा झुम्ने श्रोता भक्कुचुर भेट्न थालेका छन् अचेल । यसैलाई अहिलेसम्मको उपलब्धि मानेको उनले बताए । ‘पहिला–पहिला विदेशीहरू हाम्रो गीत सुनेर त्यति उत्साहित हुँदैनथे,’ उनले भने, ‘अहिले भाषा नबुझे पनि संगीत सुनेर रमाउँछन् । कोही त यसबारे सोधीखोजी नै गर्न थाल्छन् ।’
‘झुमीझुमी…’ गायकले सुरुदेखि नै समूहमा काम गरे । पहिलो ब्यान्ड फुटेपछि उनले आफ्नै भाइ–भतिजलाई तालिम दिएर ‘द रिदम’ सुरु गरेका थिए । सन् २००३ देखि यो ब्यान्ड अझैसम्म सक्रिय छ । दीपकका थुप्रै समकालीन संगीतकर्मीले ब्यान्डबाटै गायन यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए । यद्यपि, तिनको ब्यान्ड दिगो रहेन । धेरैले एक्लै गाउन/बजाउन थाले । ललितपुरका रैथाने, दीपक भने कार्यक्रम गर्दा ट्रयाकमा गाउनु नपरोस् भनेर पनि ब्यान्ड चाहन्छन् ।
‘स्टुडियोमा त जो पनि हिरो बन्न सक्छ,’ उनले हाँस्दै भने, ‘सच्चा कलाकारले स्टेजमा जादु देखाउन सक्नुपर्छ ।’ उनी स्वदेशका कुनै पनि कार्यक्रममा एक्लै जाँदैनन् । ब्यान्डसँग प्रस्तुति दिँदाको अथाह आनन्द गुमाउन चाहँदैनन् उनी । विदेशका शोमा भने कहिलेकाहीँ सम्झौता गर्नुपर्छ । पाँच जनालाई लग्दाको खर्च आयोजकले बेहोर्न मान्दैनन् । त्यस्तो बेला मन मार्न बाध्य हुन्छन् ।‘म लाइभ म्युजिकमा विश्वास गर्ने मान्छे,’ उनले भने, ‘लाइभमै यथार्थ देखिन्छ । ट्रयाकमा गाउँदा मज्जै आउँदैन ।’
#सच्चा कलाकारले स्टेजमा जादु देखाउन सक्नुपर्छ -दीपक बज्राचार्य
#स्टुडियोमा त जो पनि हिरो बन्छ